အပန်းဖြေဖို့အရမ်းကောင်းတဲ့နေရာလေးကတော့ … – FoodiesNavi
Company Staff Party, Dinner & Birthday Party ကျင်းပဖို့နေရာရွေးရခက်နေပါသလား? SEEDS Restaurant & Lounge လေးရှိတယ်နော်။ ဒီ Restaurant လေးရဲ့ Structure လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဝါးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ magic dining in the tree crown, Floating Water Pavilion, Table set up on the Birdnest လေးတွေနဲ့ တကယ့်ကိုကျက်သရေရှိပြီး မြန်မာမှုပြုဆောက်လုပ်ထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ ကြာဖူးလေးတွေပြည့်နေတဲ့ရေကန်နံဘေးမှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ၊မိတ်ဆွေတွေ၊အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ စားသောက်ရင်း၊ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာစကားလေးတွေနဲ့နောက်ပြောင်ရယ်မောရင်း၊ ကြည်နူးဖွယ်ရာ ညစာနှင့်နေ့လည်စာများကိုဖန်တီးလို့ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ SEEDS Restaurant & Lounge 2010 ခုနှစ်မှာ the brainchild of Swiss Michelin Star Chef Felix Eppisser and his wife Lucia တို့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ SEEDS Restaurant & Lounge ရဲ့ Location လေးကတော့.. No.(63A), U Tun Nyein Street, Ward 10, Mayangone Township Yangon ဖြစ်ပြီး၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့ နေ့လည်စာနှင့်ညစာ ဖြစ်ပါတယ်။ Birthday party, Staff dinner Party နဲ့ အခြားသော Parties & Anniversaries ကျင်းပချင်ရင်တော့ အသေးစိတ်ကို 09 972 784841 တွင်လည်းစုံးစမ်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်။
နေရာအခင်းအကျင်း၊သဘာဝအလှပ၊အစားအသောက်ကောင်းတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေးသိချင်ရင်တော့ SEEDS Restaurant & Lounge ကအခုလိုမျိုးရရှိနိုင်တဲ့အတွက်စားသုံးသူတွေကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ပုံလေးတွေကိုကြည့်ရုံဖြင့် စိတ်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ Designer ရဲ့ Idea တကယ့်ကိုမိုက်ပါတယ်။ “A romantic, Contemporary Fine Dining Getaway by the Lake” ဆိုသလိုသာယာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းတဲ့ နေ့လည်စာ/ညစာ ကိုမိသားစု၊သူငယ်ချင်း၊အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေများနှင့်အတူ ပျော်ရွှင်ဖွယ်၊ကြည်နူးဖွယ်၊စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်အချိန်လေးတစ်ခုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
အစားအစာချစ်မြတ်နိုးသူတွေအနေနဲ့ ကြည်နူးဖွယ်၊ စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ရာ နေ့လည်စာ၊ညစာဖန်တီးချင်ရင်တော့ SEEDS Restaurant & Lounge ကိုလှမ်းခဲ့ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။
SEEDS Restaurant & Lounge Website Link : www.seedsyangon.com
SEEDS Restaurant & Lounge Facebook Page : www.facebook.com/seedsyangon
In Restaurant Guides Tagged Nouvelle Burmese Cuisine Leaveacomment
Thai အစားအစာကောင်းတွေရရှိနိုင်တဲ့ Green Gallery Thai Restaurant